‪#‎OromoRefugees‬ Yaa waaq maal yakkinee ? | Oromia Shall be Free
‪#‎OromoRefugees‬ Yaa waaq maal yakkinee ?
bilisummaa April 18, 2016	Comments Off on ‪#‎OromoRefugees‬ Yaa waaq maal yakkinee ?
Yaa waaq maal yakkinee ?
Dalga nu boochiftaa
Reeffa lammiiwwan koo
Nama Biyya dhabeef
Maal hin gaddituu
Ati hin argituu?
Daa’ima ol deemtuu
Haadha dhiistee baate
Maaluma yakkanii ?
Kan qurxummiif goote
Bara baraan gadda
Lapheetu nu cabe
Keenya keessaa fi alaa
Rakkoo tu nu qabe
Boonyee hin owwaallanne
Deemnee hin barbaaddanne!
Yaa Waaqa tokkichaa
Har’a komiin qaba
Atis nu dagannaan
Eenyu nu qaqqaba?
Meeqatu boqatee ?
Mee ati nutti himi
Ofii kee galmeessii
Ati bira deemii
Nuu lakkaayi Lafee!
Deemnee bishaan seennee
Reeffa hin barbaaddannu
Galmeessii nutti himi
Akka isaan yaadannu! !
San keessa darbanii
Maaliif Naachaaf goote?
Atiyyuu ni beekta
Quuqqaa keessa keenyaa
Maal abdannee teenyaa?
Karaa ilaalaa hafuu?
Nama rakkoon qabeef
Maaf garaan kee hin laafuu?
Atis akka namaa
Yeroo isaan si waaman
Maaf isaan dagattee?
Bishaan damee hin qabu
Warri ijoolleen dhumtee
Maatiin si komatu!
Unuuf haaraa miti
Garuumee kan saanii
Yeroosan si jira
Mee maal dhaammatanii?
Maal arguu barbaadu?
Maal si gaafatanii?
Moo callisuun seenan?
Maaloo Yaa Waaqayyo
Maaluma nuu yaaddee?
Ofumaa nu uumtee
Nu fixuus barbaaddee?
Dubbiin akkas taanaan
Dhumasaa nutti himi
Wal biraa akka hin hafne
Wal qixa nu waami!
Dacheerra nu guuttee
Maaliif Naachaaf laattee?
Maatiin gadi bahee
Shakkee karaa ilaalaa
Abbaafi garaan dhalaa!
Osoo hin owwaallatiin
Hirmii nyaachaa hafu
Maal garaankee hin laafuu?
Mana Murtii dhaabee
Seeraan sin himadhu
Kanan si komadhu
Waan gooteef si beeka
Maal jedhu kan biraa
Hunduu kankee eega
Si dha hundeen firaa
Galmeen nama hundaa
Harkuma kee jiraa !!
Gadda akka kanaa
Lamuu nutti hin fidiin
Nutis si waammanna
Mee atis nu hin didiin!
Lubbuusaanii maari !
Siidaasaanii ijaari !!!
by :- Roobeeraa H.
Previous Yaso Abdalla , his wife Shagge ( Rihanna) Kadir and their 9 month baby also among those who believed to have drowned when the boat
Next #‎OromoRefugees‬ Ijoollee xixiqqoo Ashiita qacalee.